तपाइको गोत्र के हो ? कसरी थाहा हुन्छ आफ्नो गोत्र ? वंशावली सम्बन्धी जानकारी, हेर्नुहोस् - jillakhabar.com Nepal's Digital News site
Home अचम्मका खबर तपाइको गोत्र के हो ? कसरी थाहा हुन्छ आफ्नो गोत्र ? वंशावली सम्बन्धी जानकारी, हेर्नुहोस्
तपाइको गोत्र के हो ? कसरी थाहा हुन्छ आफ्नो गोत्र ? वंशावली सम्बन्धी जानकारी, हेर्नुहोस्
on: १३ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०६:५०
कतिपयलाइ गोत्र भनेको थाहा नहुन सक्छ भने कतिपयलाइ आफ्नो गोत्र र सगोत्रीहरुको थर पनि थाहा हुन्छ । गोत्रको बिषयमा अधिक जानकारीको लागी यो पुर्णपाठ गर्नैपर्छ । तपाइले अध्यायन गरेपछि सेयर गरि अन्यत्रलाइ पनि देखाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ । इतिहासलाइ जोगाउनु र नयाँ पुस्तालाइ हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।
नेपाली तथा भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता ( ई.पू.) विश्वको प्राचीन सिंधु( घाटी नदी सभ्यताहरू मध्येको एक प्रमुख सभ्यता थियो। यो हडप्पा सभ्यता र सिंधु(सरस्वती सभ्यताका नामले पनि जानिन्छ, हिन्दूका विभिन्न थरहरू हुन्छन्। ती थरहरू पनि विभिन्न गोत्रमा बाँडिएका छन्।
नेपाली समाज यी फरक–फरक पाँच महासभ्यतासँग सम्बन्धित दर्जनौ जाति र समुदाय रहेको समाज हो। उनीहरूका आ—आफ्नै वंश परम्परा, पुर्खा सम्बन्धी मान्यता एवं विश्वास र जीवन दृष्टिकोणहरू छन्। ती विषयहरू एक आपसमा फरक छन्। एउटा जाति वा समुदायका गोत्र, थर, वंशावली वा पुर्खा सम्बन्धी दृष्टिकोणबारे अर्को जाति वा समुदायलाई ज्ञान हुँदैन वा अत्यन्तै कम ज्ञान हुन्छ। गोत्र, थर, वंश परम्पराजस्ता विषयमा एक समुदायले अर्को समुदायसँग अन्तरक्रिया नगरी नहुने स्थिति जनजीवनमा अत्यन्त कम अवस्थामा मात्र आउने भएकोले पनि त्यस्तो अर्को समुदायबारे अनभिज्ञता रहन मद्दत र्पुयाउँछ। अझ यसोभन्दा झनै सही होला कि नेपाली समाजमा चल्दै आएको समग्र अर्थ–राजनीतिक ढाँचाका कारणले नै नेपाली समाजमा गोत्र, थर आदिबारे भ्रमहरू रहिरहेका छन्।
यसप्रकारको राज्यको बलात् हस्तक्षेपकारी नीतिका कारण हिन्दू उच्च जातबाहेककाको त्यस्ता विषयमा जानकारी लिन अरुलाई वास्तै नहुने, रुचि नै नजाग्ने, उनीहरूका थर गोत्र सुन्दा पनि असभ्य मान्छेको कमसल परिचय जस्तो भान हुने स्थिति बन्न पुग्यो। राज्यको त्यसप्रकारको नीति अघि बढ्दै जाँदा उत्पीडितहरूलाई थर लेख्न नदिने, थर नै फेरेर लेख्न बाध्य पार्ने आदि काम हुँदै आए। यसको सबै भन्दा बढी मार दलितमाथि र्पयो जसको कारण कतिपय स्थानका दलित परिवारले आफ्नो वास्तविक थर गोत्र नै बिर्सिसक्ने स्थितिसम्म पुगेको देखिन्छ। त्यसैगरी हिन्दू उच्च जातबाहेकका जनजाति, दलित, मुस्लिम समुदायकाले पनि आफ्नो गोत्र, थर, वंश परम्परालाई गर्वका साथ भन्न मन नलाग्ने, हिनताबोध हुने वा कम्तीमा आफैभित्र मात्र चुपचाप अभ्यास गरिरहने दुर्भाग्यपूर्ण परिघटना घट्दै आयो।
ती मुख्य ऋषिका चेला वा उपऋषिहरूको नामलाई चाँहि प्रवर भन्ने गरिन्छ। यसरी जो ऋषिका सन्तान हुन्, ती सबै उच्च जातीय मानिन्छन्स तब नीच मानिएका जातको वंश खलकलाई ऋषिसँग जोड्न मिल्ने कुरै भएन। त्यसैले दलितहरूको गोत्र र प्रवर ऋषिको नामसँग सम्बन्धित गर्न दिइएको छैन। जो जात घटुवामा परेर अछूत बन्न पुग्यो, त्यसको पनि पुरानो गोत्र क्रमशः खोस्दै लगेर आम ‘अछूत’ को परम्परागत गोत्रमै कायम गरिदिने प्रचलन चल्यो।
यसप्रकार हिन्दू उच्च जातीय गोत्र वास्तवमा हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातीय श्रेष्ठता कायम गर्न निर्मित मिथक मात्र हुन्स मानव समाजको सभ्यताको शैशवकालीन एउटै वंश परम्परामा आधारित गोत्रको निरन्तरता होइन। यो विषयलाई सामान्य विश्लेषणबाट पनि स्पष्ट पार्न सकिन्छ किनभने ऋषिहरू स्वयमको गोत्र के थियो? के ऋषिहरूभन्दा पहिले गोत्रमा आधारित समाज थिएन? समाजमा ऋषि स्वतः थोरै हुन्थे भने ऋषिबाहेकका बहुसङ्ख्यक मानिस जो हिन्दू नै थिए, तिनको गोत्र के थियो? ऋषिपछिका त आजका तागाधारी समुदाय भए तर ऋषिहरूसँगै बाँचेका मानिसहरू जो ऋषिका सन्तान होइनन तर हिन्दू नै हुन, ती तमाम ब्राह्मण र क्षेत्रीय बाहेकका वैश्यहरूको गोत्र पनि कसरी ऋषिकै नाममा रहन गयो?
गोत्र सम्बन्धी विवरण यहाँ हेर्नुहोस ।
कारण यही नै हो। जात अर्थात् श्रम क्षेत्र वा पेशा। यस प्रकार जातको नाम पनि श्रम वा स्थान विशेषसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् र अहिले पनि प्रचलित जातको नामको चरित्र त्यस्तै कायम नै छ। जस्तै, कर्मीबाट कामी, दमाह बजाउने दमाहीबाट दमाई, जुम्लाको –कतिपयका भनाइमा हुम्ला) सराक भन्ने स्थानबाट फैलिएका सराकीबाट सार्की, वाद्य अर्थात बाजाको काम गर्ने वाद्येयीबाट बादी, गाउनेबाट गाइने, द्य (देउता) को मन्दिर सफा गर्ने, रखवारी गर्ने द्यलास चर्म अर्थात् छालाको काम गर्ने चमार आदि आदि।
नेपाल यस्तो देश हो जहाँ नाम र थरको आधारमा एउटा समुदायलाई मात्र प्रष्ट चिन्न सम्भव छ— त्यो हो मुस्लिम। अरु कसैको पनि पहिचान सम्भव छैन। लामा थर लेख्ने नेपालमा दर्जन भन्दा बढी जाति छन्। लामा थरका आधारमा जाति कसरी चिन्ने? मण्डल, चौधरी, लगाएतका थर लेख्ने थुप्रै जातरजाति छन्। थरका आधारमा कसरी जात चिन्ने? शर्मा थर लेख्ने आर्य–खस, नेवार र मधेसमा छन्। थरका आधारमा कसरी चिन्ने? किराँत राई या राय दुवै पदीय थर हुन् जुन दनुवार, किराँत, यादव, नेवार र क्षेत्रीको हुन्छ। अब कसरी छुट्याउने? बुढाथोकी मगर, कामी, क्षेत्री हुन्छन्। अब थरका आधारमा कसरी किटान गर्ने? पौडेल उपाध्याय ब्राह्मणदेखि बादीसम्म हुन्छन्। राउत पहाडिया क्षेत्री, मधेसी वैश्य र धोवी दलितसम्मको हुन्छ। कसरी जात छुट्याउने?
तसर्थ, थरहरूको आधारमा मात्र नेपालमा जाति वा जात प्रष्ट हुन्छ भनी बुझ्ने बुझाइ नै गलत छ, त्यस बुझाइलाई फेर्नु अवश्यम्भावी छ। नेपालमा जाति वा जात जान्न वा खुलाउन खोज्दा थर मात्र भनेर पुग्दैन बरु जाति वा जात पनि अनिवार्य रूपमा खुलाउनु पर्ने हुन्छ। थरको आधारमा मात्र व्यक्तिको सम्पूर्ण परिचय खुल्ने अवस्था नेपालमा छैन। कतिपय समुदायले आफ्नो पहिचानलाइ नै लुकाएर अन्य थर राख्ने गरेको भएर पनि नेपालको सन्दर्वमा यो सम्भव नै छैन ।
नेपाल तरुण दलको जैमिनि न.पा बाग्लुङमा प्रशिक्षण सम्पन्न
सरकारले मंगलबार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने